Ny horonantsary Ross dia nahazo isa enina ambin'ny folo - Sary an-tsary | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » Ny horonantsary Ross dia nahazo isa enina ambin'ny folo - Sary an-tsary
Ross Video faly manambara ny fahazoana ilay sary mihetsika eto Toronto. Image Video dia natsangana tamin'ny 1974 - tamin'io taona io ihany koa i Ross - ary malaza amin'ny sehatry ny fifehezana ny talenta TSI, ampiasain'ny mpamatsy tambajotram-pifandraisana lehibe, toerana fanaovana fanatanjahantena, fotodrafitrasa misy ny orinasa sy trano fivavahana. Miaraka amin'ny varotra any amin'ny firenena sivy amby roapolo mahery, ivon-toeran'ny mpanjifa mahatalanjona ary protokolan'ny fitaovana an-jatony an-jatony (miainga amin'ny fifandraisana misy lova hatramin'ny alàlan'ny fiasa farany ST2110), ny sehatra TSI dia mitarika hatrany amin'ny sokajy vokatra Tally sy UMD.
Ity fahazoana ity - Ross Videofahenina ambin'ny folo nanomboka ny taona 2009 - dia hahita ny ekipan'ny vokatra Image Video tarihin'i Zach Wilkie sy David Russell, miaraka amin'ireo ekipa R&D sy ekipa mpanohana ara-teknika azy ireo. Zach Wilkie ankehitriny Mpitantana ny vokatra, Ross Tally Systems, dia faly amin'ny fahatsinjovan'ny fiainana ao anatin'ny Ross Video. “Amin'ny maha-orinasa kanadiana mpiara-miasa antsika izay naorina tamin'io taona io ihany, mazava ho azy fa nihalehibe izahay niaraka Ross Video ary hitantsika ny fitomboana mahavariana sy ny fanitarana ny orinasa Ross, indrindra nandritra ny folo taona lasa. Faly be izahay fa tonga anisan'ny fianakaviana ary io fividianana io dia hanampy anay hanatratra tsena iraisam-pirenena vaovao sy hivoatra amin'ny fomba mandaitra kokoa. ”
David Ross, CEO, dia maneho ny maha-zava-dehibe ny fahazoana azy. “Tamin'ny 1973 dia tany amin'ny hopitaly ny raiko rehefa tapaka ny tongony. Jim Leitch, mpanorina ny Leitch Video (ankehitriny sary an-tsaina Communications) nitsidika sy nanoro hevitra ny raiko hanangana ny orinasany manokana. Nilaza izy fa misy Leitch Video sy sary misy sary any Canada, koa tokony hisy koa Ross Video. Mety raha tsy nisy ny sary an-tsary dia mety tsy nanana maodely toy izany ny raiko hanehoana ny lalana, ary na dia i Dada aza no nanangana ny orinasanay, dia mety tsy hotononina anarana isika Ross Video amin'izao andro izao! Taona maro taty aoriana dia ampahany amin'i Ross izao ny sary, zavatra eken'ny raiko fa tena mahavariana. Ny sehatra TSI tally an'ny sary dia famenon-tsofina lehibe amin'ny vahaolana misy eto aminay ary ahafahan'i Ross mitondra safidy bebe kokoa amin'ny tsena famokarana mivantana. ”
Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Ross Tally Systems, azafady kitiho eto.
Ross Video - Vahaolana avo lenta, vahaolana avo lenta
Ross dia mamokatra famokarana horonantsary mivantana ho an'ny mpijery manerantany amina miliara isan'andro miaraka amin'ny sokajy midadasika indrindra ao amin'ny orinasa fiatraikany avo, fahombiazana avo vahaolana sy serivisy. Mora i Ross amin'ny famoronana vaovao, toetrandro ary fanatanjahan-tena maharesy lahatra fandaharana, atiny manintona ho an'ny efijery kianja filalaovana, seho fialamboly ary kaonseritra rock, toeram-pampianarana, fivorian'ny mpanao lalàna, fampisehoana orinasa ary atiny manome aingam-panahy ho an'ny Trano fivavahana.
Ireo vahaolana Ross dia nampiaiky ny mpanaraka sy ny mpivarotra marketing Eurosport, BBC World, SKY, Google YouTube Space London, ary ny toby famokarana herinaratra iraisam-pirenena ESL. Ross dia manome karazana vokatra sy serivisy tsy manam-paharoa izay misy fakan-tsary, sary mihetsika amin'ny fotoana tena izy, mpamindra famokarana, rafitra fakan-tsary robotika, studio fampitomboana ny zava-misy / virtoaly, mpizara video, fotodrafitrasa sy ny router, fitantanana media sosialy, rafi-kefitra ary serivisy famokarana hetsika mivantana.
Previous: Velocix dia mampiseho ny dokam-barotra amin'ny horonantsary Cloud-Native sy ny serivisy fanamoriana manokana ny stream
Next: Ny sary Pace dia mampiasa ny endrika Blackmagic hanaparitahana ny tsipika eo anelanelan'ny famokarana sy ny paositra